ထူးချွန်ဆုလား? ပရိသတ်ကြိုက်ဆုလား? – The Blog of Aung
ဒီနှစ် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ပွဲပြီးတဲ့နောက် ပရိသတ်က ဝေဖန်ကြသလို၊ ရုပ်ရှင် နယ်သားများကလဲ အမျိုးမျိုးပြောကြတာကို ဖတ်ရတဲ့ အခါ၊ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ဆု ဆိုတာ – ဟောလိဝုဒ်က အော်စကာဆု လို ရုပ်ရှင် ပညာ အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ပြီး ထူးချွန်တာကို ရွေးချယ်ပေးတဲ့ ဆုမျိုးလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီနေ့ ကမ္ဘာ့ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဥ်တွေမှာ ပရိသတ်က မဲပေး ရွေးချယ်ရတဲ့ ပရိတ်သတ် အကြိုက်အများဆုံး ဆုပေးတဲ့ ‘Got Talent’ လို ဆုမျိုးလား ဆိုတာ ဝေဝေဝါးဝါး ဖြစ်မိပါတယ်။
ဟိုအရင်တချိန် ၁၉၈၅ ခုနှစ်လောက်က မြန်မာပြည် ရန်ကုန်နဲ့ အခြားမြို့ကြီးများမှာ ဗီဒီယိုခွေ အဌားဆိုင်တွေ ပေါ်လာတုန်းကဆိုရင် – ဟောလိဝုဒ်မှာ အော်စကာ ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ဗီဒီယို ခွေဆိုင်တွေက စျေးလျော့ ငှားကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အော်စကာရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကို လူသိပ်မကြိုက်ကြ၊ မကြည့်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လူကြိုက်များတဲ့ ရုပ်ရှင်၊ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်မို့လို့ အော်စကာ ဆုရတာမဟုတ်ပါဖူး။ ရုပ်ရှင်ပညာ ထူးချွန်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပညာရှင်တွေသာ အော်စကာဆု ရကြတာပါ။
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောကမှာတော့ ရုပ်ရှင် ပညာကို အကဲဖြတ်ပြီး ထူးချွန်သူ ရွေးဖို့ဆိုတာ – ကြည့်ကောင်းတာ၊ ခံစားကောင်းတာကို ပေးရတယ်လို့ ထင်ကောင်း ထင်ကြမယ်လား မသိပါ။ အောက်မှာ မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာကြီး တစ်ယောက်ပြောတဲ့ စကားကိုလဲ ဖတ်ကြည့်ပါအုံး…၊
စိန်ကျောက် အကြောင်းကို ကောင်းကောင်း နားလည်တဲ့သူဟာ အသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောကျ်ားဖြစ်စေ၊ စိန်တစ်လုံး ကျောက်တစ်လုံးကို ကြည့်လိုက်ရင် ဒီစိန် ဒီကျောက် ဘယ်လောက်တန်တယ် ဆိုတာ အားလုံးက အတူတူ ပြောနိုင်ရမှာပေါ့။ အသက်ကြီးတိုင်း အကဲဖြတ်လို့ မမှန်ဆိုရင်တော့ အကဲဖြတ်တာ နည်းမမှန်လို့သာ ဖြစ်တော့မှာပါ။
တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်ပညာ ထူးချွန်ဆု ဆိုတာ ပရိသတ် အကြိုက် လိုက်ပေးစရာ မလိုပါဖူး၊ အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ပြပြီး ပညာရှင်နဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးဖို့သာ ဖြစ်ရမှာပါ။ ဥပမာ – စိန်ကျောက် အကြောင်းကို နားလည်ရင်တော့ နားလည်တဲ့ သူက အကဲဖြတ်ပေးတဲ့ အခါ၊ ဝယ်တဲ့သူ ရောင်းတဲ့သူက တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်တတ်သလိုပါဘဲ။
ရုပ်ရှင် ပညာကို အင်္ဂလိပ်လို ‘Moving Image’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Moving Image ပညာကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် ရှေးဦးစွာ ရုပ်ရှင်ကို အကဲဖြတ် လေ့လာတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကို အကဲဖြတ် လေ့လာတတ်ဖို့မှာ ‘Mise-en-scène’ ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကို နားလည် တတ်ကျွမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
‘Mise-en-scène’ ဘာသာရပ်ကို ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြစ်စေ၊ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြစ်စေ၊ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး အပိုင်းက ပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ နားလည် အသုံးချဖို့ မလိုအပ်ပေမဲ့၊ ရုပ်ရှင် ပညာကို စံနစ်တကျ အကဲဖြတ် လေ့လာမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကတော့ ကောင်းကောင်း တတ်သိ နားလည် အသုံးချတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကို အကဲဖြတ်လေ့လာတဲ့ ပညာရှင်တွေက ဖော်ပြတဲ့ ရုပ်ရှင် ပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုံ့သပ်လေ့လာချက်ကို ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ပညာရှင်တွေက ဆန်းစစ်ပြီး မိမိတို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို အဆင့်အတန်း မြှင့်တင်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်မို့ ရုပ်ရှင်ပညာ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များမှာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား အကဲဖြတ်သူ ပညာရှင်တွေဆိုတာ ရုပ်ရှင် မင်းသား မင်းသမီး၊ ဒါရိုက်တာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေး ဆရာတွေ စသည်ဖြင့် ဖြစ်စရာ မလိုဖူး ဆိုတာ တွေ့မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အဲသည်လို ရုပ်ရှင်ကို အကဲဖြတ် လေ့လာတတ်တဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ပညာကို တန်ဖိုးမဖြတ်ဘဲ ကြည့်ကောင်းတိုင်းသာ ရွေးချယ် ဆုပေးမယ် ဆိုရင်တော့ ‘ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု’ ဆိုတာထက်၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် (ဒါမှမဟုတ်) ပရိတ်သတ် စိတ်ကြိုက် ဆုလို့သာ ခေါ်ရင် ပိုသင့်တော်မယ် ထင်ပါတယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on March 28, 2019 March 28, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags ရုပ်ရှင်
One thought on “ထူးချွန်ဆုလား? ပရိသတ်ကြိုက်ဆုလား?”
Previous Previous post: ‘မြန်မာ’ ဆို ဘယ်သူသိမှာလဲ?
Next Next post: မြန်မာစကား ပြောတတ်သေးရဲ့လား?